अल्जाइमर - विकिपिडिया
स्मृति क्षय हुने रोगलाई अल्जाइमर भनिन्छ विस्तारपूर्वक भन्ने हो । अल्जाइमर रोग ‘एलोइस अल्जाइम’ नामक व्यक्तिको नामबाट सन् १९१०, जुलाई १५ मा राखिएको हो ।  अल्जाइमर रोग मस्तिष्कका विकृतिहरूको समूहगत रोग हो, जसले सोच, स्मृति, बोली, निर्णय क्षमता, छनोट तथा व्यक्तित्वलाई दुष्प्रभावित गर्छ। यस रोगले व्यक्तिको व्यवहार तथा व्यक्तित्व परविर्तन गर्ने, बिसर्ने, संशय हुने, नयाँ कुरा सिक्न नसक्ने, अरूप्रति विश्वास नगर्ने, शंका गर्ने, हिँडडुल गर्न नसक्ने बनाउँछ। यो रोग विस्तारै बढ्दै जाने भएकाले पहिले यसको निदान हुँदैन, जसका कारण सुरुको अवस्थामा अधिकांश बिरामीले परीक्षण तथा उपचारको आवश्यकता महसुस गर्दैनन्। बुद्धि ह्रास हुँदै जाने भएकाले बिरामीले दैनिक कामहरू खाना बनाउने, टेलिफोन उठाउने, उपयुक्त कपडा लगाउनेजस्ता काम गर्न सक्दैनन्। अन्ततः आफ्नै छोराछोरीसमेत नचिन्ने अवस्था हुन्छ। मानिसको आयु बृद्दि संगै यो रोग यति ब्यापक हुदै गएको छ कि सन २०५० सम्ममा विश्व का १ प्रतिशत भन्दा वढि मानिसलाई (प्रत्येक ८५मा १ जना) यसले गाज्ने अनुमान गरिएको छ|
विस्मृति रोगका बिरामीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या स्मरण शक्ति ह्रास हुनु हो। विस्मृति रोगोन्मुख व्यक्तिले विश्लेषणात्मक ढङ्गले सोच्न सक्दैनन् र कुरा पनि सम्झन सक्दैनन्। तत्कालैका घटना, फोन नम्बर, समयतालिका अनुसारको काम तथा भेटघाटको कार्यक्रमसमेत बिर्सिन्छन्। अरूले भनेको कुरा आफूले नबुझ्नु तथा आफूले भनेका कुरा अरूले नबुझ्ने समस्या दोहोररिहन्छ।
यो रोग मस्ितष्कका कोषिकाहरू नष्ट भएर हुन्छ। यसको ठोस कारण हालसम्म यकिन भएको छैन। तथापि, विस्मृति रोगबाट मृत्यु भएका बिरामीको पोस्टमार्टम गर्दा दुई कारणहरू पाइएका छन् :
१. मष्तिष्कको हिप्पोक्याम्पस, दायाँबायाँ र अगाडिका भागको स्नायुहरू गुजुल्टो परेर तथा ती स्नायुकोषभित्र 'ताउ' नामक प्रोटिन जमेको हुन्छ।
२. स्नायुकोष तथा स्नायुबाहिर 'विटा इमाइलोड' नामक प्रोटिन टाँसिएको हुन्छ, जसका कारण स्नायु र रक्तनलीहरू साँघुरो भएर मस्ितष्ककोष तथा स्नायुकोषहरू मर्छन्। त्यस्तै, 'विटा एमाइलोड'ले एसिटाइलकोलिन नामक हार्मोन -सिक्ने, सम्झने, सोचविचार गर्ने हार्मोन) घटाउँछ।
१ कारक तत्त्वहरू
२.१ क) सुरुको अवस्था
२.२ ख) बीचको अवस्था
२.३ ग) गम्भीर अवस्था
उमेर : सामान्यतया ६५ वर्ष उमेरपछि यो रोग लाग्छ। ६५ वर्षपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा यस रोगको प्रभाव दुई गुणा बढ्दै जान्छ।
लिङ : यो रोग पुरुष र महिला दुवैलाई लाग्छ। तथापि, बढी संवेदनशील स्वभाव र आयु लामो हुने भएकाले महिलामा बढी पाइन्छ।
वंशाणुगत : आफ्नो अग्रज वंशमा यो रोग भएमा अनुज वंशमा रोग लाग्ने सम्भावना दुई-तीन गुणा बढी हुन्छ।
गम्भीर रूपमा टाउकोमा चोटपटक लागेको व्यक्तिमा।
उच्च रक्तचाप तथा उच्च कोलेस्टेरोलका कारण मस्ितष्कमा रक्तसञ्चरण प्रभावित तथा अवरुद्ध भएमा।
डीप्रेसन तथा चिन्तालगायतका मानसिक समस्या भएका बिरामी र अधिक मोटोपना भएकालाई।
डिमान्सिया, डाउन सिन्ड्रोम, सुस्त मनस्िथति भएका बिरामीहरूलाई।
मानसिक निष्त्रिmयता भएका व्यक्तिहरूलाई।
कोही भाइरस, विषाक्त पदार्थ, धातु, विद्युत्, चुम्बकीय प्रभाव, धुम्रपान, अत्यधिक मद्यपान, कुपोषण आदिलाई पनि कारक तत्त्व मानिएको छ।
अल्जाइमर रोग विस्तारै बढ्दै जाने भएकाले सुरुको अवस्थामा 'प्रस्ट लक्षणहरू' देखिँदैनन्। उमेर, शारीरकि अवस्था तथा रोगको प्रकृति अनुसार ५-१० वर्षपछि निम्नलिखित लक्षणहरू देखिन्छन् :
क) सुरुको अवस्थासम्पादन
तत्कालीन घटना एवं कुराकानी बिर्सने।
सामान हराइरहनु, आफैँ हराइरहनु।
एकाग्रतामा कमी हुनु।
जटिल शब्द तथा वाक्यहरू सम्भिmन नसक्नु।
जोडघटाउलगायत गणितमा अलमलिनु, हरहिसाब अस्तव्यस्त हुनु।
हिडाइ असामान्य देखिनु।
एउटै कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहनु।
दिनचर्या अस्तव्यस्त हुनु।
भाषिक समस्या हुनु। जस्तै- प्रचलित वस्तुको नाम भन्न नसक्नु।
एक ठाउँमा राख्नुपर्ने सामान अर्कै ठाउँमा राख्नु।
चिनेको बाटो बिर्सनु।
वक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक कामबाट अलग हुनु।
पहिलेका रुचि एवं मनोरञ्जनका विषयमा अरूचि हुनु।
सोचविचार एवं समीक्षा गर्न नसक्नु।
ख) बीचको अवस्थासम्पादन
तत्कालीन घटनाहरू बिर्सनु।
आफ्नो विगतका क्षणहरू बिर्सनु।
आफ्नो पहिचान बिर्सनु।
निन्द्रामा समस्या पर्नु, निन्द्रामा हिँड्नु।
पढ्न र लेख्न असजिलो हुनु।
राम्रो, नराम्रो वा खतरापूर्ण वस्तु पहिचान गर्न नसक्नु।
निर्णय क्षमता ह्रास हुनु।
अप्रासंगिक कुराहरू गर्नु, उच्चारण गलत गर्नु, अस्पष्ट वाक्य बोल्नु, बेसुराका कुरा गर्नु।
मतिविभ्रम हुनु, वादविवाद गर्नु, कुटपिट एवं हिंस्रक हुनु।
भ्रम, अवसाद, सन्कने, रसि, चिन्ता, शंका, डर बढी हुनु।
आधारभूत कामहरू जस्तै- खाना बनाउने, कपडा छान्ने/लगाउने, नुहाउने आदि काममा अरूको सहायता खोज्नु।
ग) गम्भीर अवस्थासम्पादन
समवेदना हराउने, कुरा नबुझ्ने।
अडिन नसक्ने, लड्ने।
आफन्त, साथी एवं परविारका सदस्यहरूलाई नचिन्ने।
खाने, लगाउने, नुहाउने, बस्नेजस्ता सामान्य काम पनि गर्न नसक्ने।
खानेकुरा चपाउन तथा निल्न नसक्ने।
ओछ्यानमा थला पर्ने, दिसा-पिसाबको नियन्त्रण हराउने, अरूको बोली नबुझ्ने, बोल्न नसक्ने।
अल्जाइमर:बुढेसकालको रोग :डा रवीन्द्र पाण्डे
विकिमिडिया कमन्समा अल्जाइमर सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
↑ "अल्जाइमर रोग सम्बन्धी केही तथ्य एवं जानकारी", अन्तिम पहुँच १० Oct २०१९।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अल्जाइमर&oldid=993666" बाट अनुप्रेषित